जीवनशैली | Page2of 10 | Kailashkhabar.com
तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ : गृहपृष्ठ › जीवनशैली
खानपीन जीवनशैलीले मुटुलाई यसरी बचाउन सकिन्छ !
काठमाडौंँ । जथाभाविको खानपीनले निको भएको मुटुरोग फेरि फेरी बल्झीने गरेको छ । अव्यवस्थित जीवनशैलीले स्वस्थ मुटुपनि खराबहुदै गएको चिकित्सकले बताउदै आएका छन् । अझ कोरोना भाइरसको बन्दाबन्दीमा खानपान...
‘मलाई लाज लाग्न थाल्यो प्रधानमन्त्री ज्यू !’ ऋचा शर्मा
काठमाडौं । अभिनेत्री ऋचा शर्माले साना बालिकाहरुमाथि भैरहेको यौन हिंसाका घटनालाई मध्यनजर गर्दै बलात्कारीलाई कडा कानुन आवश्यक रहेको जनाउदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खुला पत्र लेखेकी छिन। आफ्नै एकाउन्ट...
मार्मिक कथा – ‘जीवन संगिनीको विदाई’
मान्छे गई सके त्यसको महत्व थाहा हुने गर्दछ । पत्नी छ त संसारमा सबै छ । एउटा राजाको जस्तो जीवन बिताउन पाऊँदा र आज संसारमा आफ्नो टाउको उच्च राख्न...
मोटोपन घटाउन यी खानेकुरा खानुहोस्…
काठमाडौं । कोरोना कहरमा लकडाउन, निषेधाज्ञा र घरभित्र बस्नाले मोटोपनको समस्या निम्तिए धेरैले अनुमान गरेका छन् । घरबाटै सम्पूर्ण कार्यालयका कामदेखि स्कुल, क्याम्पसका पठनपाठन अनलाइन संचालन भइरहँदा आम जनमानसको...
विश्वका अनौठा परम्परा : महिनावारी हुँदाको रगतमा दूध, कपूर र नरिवल मिसाएर पिउन लगाइन्छ !
एजेन्सी । महिनावारीका समयमा नेपालमा महिलालाइ विभिन्न काम गर्न निषेध गरिएको हुन्छ । हिन्दु परम्पराअनुसार नेपालमा पनि त्यस्ता थुप्रै अन्धविश्वास अझै जीवित छन् । जस्तै मन्दिरभित्र जानमा रोक लगाइन्छ,...
भगवान विश्वकर्मा को हुन् ?
काठमाडौं । ब्रह्मा र विष्णुलाई सृष्टिको सृजना र पालनको छुटछुट्टै जिम्मेवारी भगवान महादेवले दिएका थिए । सृष्टिको सृजना गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन ब्रह्माले आफ्नो वंशजदेव शिल्पी विश्वकर्मालाई आदेश दिए...
दूध र तुलसीका पात उमालेर पिउँनुहोस् र पाउनुहोस् यी ५ रोगबाट छुटकारा
काठमाडौं । तुलसी पुजाका लागि मात्रै उपयोगी छैन, यसका पात झन उपयोगी सावित भएका छन् । यसमा औषधीय गुणले भरिपूर्ण भएको हुनाले वैज्ञानिकले थप अध्यन पनि गरिरहेका छन् ।...
गायक प्रमोद खरेलको घिटी–घिटी
काठमाडौं । गायक प्रमोद खरेलको स्वर रहेको नयाँ गीत घिटी–घिटी सार्वजनिक भएको छ। म्युजिक भिडियोसहित सार्वजनिक गीतमा भीम बिसीको संगीत, टीका खड्काको शब्द र नरेन्द्र वियोगीको एरेन्ज रहेको छ।...
यता निषेधाज्ञा उता एकैदिन कपाल बढेर हैरान
काठमाडौं । तपाईं कपाल वर्षभरिमा कतिपटक काटनु हुन्छ ? युवाहरुमा चाहिँ कपाल अति चाडो बढ्छ । यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । आज भोलि निषेधाज्ञा छ । तर एकै दिनमा...
सार्थक जीवन जिउनका लागि अपनाउनुस् यी सात तरिका
जीवन हो, जिउन त पर्छ नै । तर, हामी त्यो जीवन कसरी जिउने भन्ने कुरा मर्दासम्म पनि जानिराखेका हुँदैनौ । जीवन जिउने भनेको बाँच्नु हो तर स्वस्थ जीवन जिउनु...
प्रेरक कथा : ‘बुहारी’
‘बुहारी’ “बुहारी, ओ बुहारी ! कता मरिस् ?” भित्र बाट आवाज आयो, “आएँ सासु आमा ! बाँचेकी नै छु” “खै त मेरो चिया ? कति बेला देखि पूजा सिद्ध्याएर...
यो तस्बीर जसले १०० वर्ष अघिको झल्को आउँछ
काठमाडौं । संसारमा अहिले कोरोनाभाइरसले तहल्का मचाईरहेको छ । अर्थात महामारी फैलिँदै गएको छ । प्रत्येक १०० वर्षमा संसारभरि कुनै न कुनै महामारी फैलिएर मानिसहरूले ज्यान गुमाउने गरेका छन्...
निषेधाज्ञाका बेला बढ्दो मानसिक समस्या, यसरी गर्नुहोस् समाधान
विश्वभर कोरोना भाइरसको प्रकोप छ । नेपालमा कतै बन्दाबन्दी त कतै निषेधाज्ञा छ । मानिसहरु घरभित्रै बसिरहेका छन् । कोरोनाको भयसँगै विभिन्न किसिमका मानसिक रोगका लक्षण पनि देखा परेको...
यता कोरोना उता उपचार, यसरी मनाए नर्सले तीज
लुम्बिनी । आज अर्थात भदौ पाँच गते शुक्रबार हिन्दु नेपालीहरुको महत्वपूर्ण पर्व तीज । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका नर्सलाई तीजको कुनै रौनक थिएन । उनीहरु कोरोना संक्रमित बिरामीकै चिन्तामा...
‘म पनि त कमाउने भाकी छु, दुइचार अक्षर पढेकी छु’
३२ साउन २०७७ काठमाडौँ । गायिका सुनीती कार्कीको स्वरमा सजिएको तीज गीत मै पनित कमाउने भाकी छु अहिले पनि चर्चित छ । दुई वर्ष पहिले बजारमा ल्याएको यो तीज...
चिहानबाट लाश उठ्ने छन् !
चिहानबाट लाश उठ्ने छन् मरुभूमीमा मुल फुट्ने छन् स्वर्गमा ईन्द्रलाई खवरदारी गर्दै एमराजको एउटै चिहान बनाउने छन् ) २ त्यसैले ए मुर्ख बादशाह हो तिम्रो कालो ईतिहास च्यातचुत पार्दै...